Top 3 Iziporo yaseYurophu Ukhonza Ukutya Good | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Top 3 Iziporo yaseYurophu Ukhonza Ukutya Good
Top 3 Iziporo yaseYurophu Ukhonza Ukutya Good
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/12/2020)
Mhlawumbi ukhe weva nxazonke, kodwa awuzange uyikholelwe.
Iintetho ze nokudla Isitimela okumnandi, Awukude kangako nenyaniso- ungonwabela konke ukuluma kwisidlo sakho sikaloliwe! Abafana namantombazana, kololiwe ukukhonza ukutya okulungileyo akukho intsomi - babe real, kwaye uza kukuxelela indlela real (yaye phi oko).
Libala ukudla ndiza kuba wakube uzame izitya zezi 3 Iindawo zokutyela zoololiwe zaseYurophu, uya uyazi eyona ntsingiselo iziporo ukukhonza ukutya okulungileyo. okanye, ngcono noko - ukutya okumnandi.
1st ayikhe ukuze Railways ukukhonza ukutya okulungileyo – kaloliwe German
Yikholwe okanye hayi kodwa Oololiwe be-ICE beDeutsche Bahn ngoku bakhonza enye yezona zinto zahlukileyo kubhodi ebhodini eYurophu. Abahambi ngale oololiwe ukufumana ukonwabela wabongamela uHorst Lichter, umpheki usaziwayo, umbonisi, kunye nombhali wencwadi yokupheka owayesebenzisana noDeutsche Bahn ngaphakathi 2014. Njengenxalenye yephulo lakhe lonyaka wonke, Lichter wasungula 12 iingcamango ezintsha iresiphi kuyo ngaphezu 250 iinkonzo zokutya. Eli phulo libizwa ngokuba 'Ngcamlani bese sithola Germany,'Kwaye yonke into ofuna ebomini bakho kanye ngoku. Enye into enkulu malunga neli phulo enye imbangela yayo. angala, cents ezilishumi ukusuka zonke bakhonza isidlo iphele ngenxa ukukhuselwa nokulondolozwa ehlathini german imimandla! Yiyiphi indlela enkulu ukudibanisa unyuso kunye nokutya nemihlali, kunene?
Ethetha ukudla liyana, loo nto bonke. Kunyaka ophelile, Deutsche Bahn wanika ithuba lokuba 7 Blogger ukudla lokubeka isidlo yabo yokuzikhethela kule menu ekwinqwelo. Ngaphezu, qho emva kweenyanga ezimbini phakathi UTshazimpuzi 2017 yaye EyoKwindla 2018, lo kukhetha ukuba nempinda yonke into ukususela Vega and imifino izitya abantu ngamaxesha athile. emangele? Sasi, kakhulu! Kololiwe ukukhonza ukutya okulungileyo ngokuqinisekileyo ukuqala nge kaloliwe German.
IFrankfurt ukuya eHamburg iTikiti lamatikiti
Iibhasi eziya eHamburg
IVienna ukuya eHamburg
I-Cologne ukuya eHamburg
2nd ayikhe ukuze Railways ukukhonza ukutya okulungileyo – Eurostar
Business INkulumbuso Abakhweli Eurostar kaThixo Qinisekisa sinandipha unyango inkwenkwezi ezintlanu-ngandlela zonke. Le nkonzo cross-umda kudala kwiimenu yamaxesha ngokusebenzisana namnye ngaphandle umlawuli zokupheka Raymond Blanc! Umsunguli Brasserie Blanc, ZOMBINI, kunye Umpheki umxhasi ezimbini zokutyela Michelin-eziphawuliweyo, Blanc yenza ukuba ukutya ubalasele. Yonke into organic kwaye evela kumafama. Plus, zonke izidlo bakhululekile kwimveliso yemfuzo lidibanise Cuisine British ne French. Blanc uyasebenzisana nganye Eurostar kaThixo 3 Amakhitshi ukuba bayile izidlo alibaleke.
Eurostar Ogcina up nge ntsingiselo ukutya, ngoko yonke into gluten kunye zobisi-free ukuba abakhweli ukuze ukuze. Kukwanjalo uya kuba Vega kunye imifino iipleyiti, kakhulu kwaye oku nguye kuphela iziporo kwethu ukutya entle a itonela!
PHAWULA: Le kuphela Imeko apho obsessively ukuthatha ifoto ukutya yakho yamkelekile na kule loliwe. Umelwe ukuba Makabukhanyise Instagram yakho zokupheka Blanc xa!
ILyon ukuya eLoliwe waseLondon i-Eurostar
Lokugqibela kuluhlu lwethu – Railway Great Western
wonke, hambisa – ngokuba Omkhulu Western Railway (GWR) ke kololiwe ukukhonza ukutya okulungileyo! GWR ngokuyintloko yabambisana Umpheki kunye restaurateur Mitch Tonks ukuyila lwemenu fabulously okunencasa yayo London - Penzance abakhweli. Ukutya wasebenzisa neziseko imithombo, kunye abapheki professional ekulungiseleleni kwi ebhodini. kodwa, ibali ayipheli khona. Kunyaka ophelile, I-GWR ivule imoto yayo yokutyela iPullman, okanye njengoko bethanda ukuyibiza ngokuba "yenye yezona mfihlo zaseBritane zigcinwe kakuhle." Imoto inemenyu entsha kraca ekunikezelweni ngayo nazo zonke ezinye izinto. Njengabameli GWR uchaze, "Imoto Pullman uthembisa ukuba anibuyisele ngemihla yokuhamba kaloliwe kangaka; elinezihlalo eliphambili, amalaphu etafile amhlophe amhlophe, nenkonzo yesilivere kwiqela lethu elinobuhlobo. ”
Wonke umntu ufanelwe kololiwe ekukhonzeni ukutya okulungileyo kwaye ngoku Uyayazi esiqeqesha bokubi, yonke into lula. Khetha Gcina A Isitimela ukuba itikiti kaloliwe kwaye uqale ukunandipha ubomi bakho ukutya elungileyo namhlanje!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-railways-serving-good-food%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / zh-CN ukuba / fr / kwaye iilwimi okanye ngaphezulu.
#kwibhodi #ukutya deutschebahn eurostar ukutya traveltips